अन्तरिक्षमा कसरी बित्छ यात्रीको दैनिकी ? - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeसूचना-प्रविधिअन्तरिक्षमा कसरी बित्छ यात्रीको दैनिकी ?
काठमाडौं । अन्तरिक्षमा मानवले पहिलो पाइला टेकेको छ दशक बितिसकेको छ । त्यो समयदेखि आजसम्म आउँदा मानिसको अन्तरिक्ष यात्रामा धेरै फरक आइसकेको छ ।
अन्तरिक्षमा हुने परीक्षणमा कहिलकाहिँ सामान्य खेलौनाहरू पनि प्रयोग गरिन्छ । योसँगै स्पेस स्टेसनमा, अन्तरिक्षयात्रीहरूको लागि मुभी, संगीत, पुस्तकहरू, तास लगायत अन्य खेलको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । साथै उनीहरूले सोही समयमा पृथ्वीमा भएको आफ्नो परिवारसँग पनि सम्पर्क गर्नसक्छन् ।
Previous articleएमाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भीम रावलको घोषणा
Next articleपाकिस्तानको पूर्वाधार परियोजनाका लागि ६ अर्ब डलर ऋण दिन चीन अनिच्छुक !